Baardheere Oo Bandow Lagu Soo Rogay Iyo Go’aano Ad Adag Oo Ka Soo Baxay Alshabaabka Baardheere
Xoogaga Alshabaab ee ka arrimiya degmada Baardheere ayaa waxa ay bandow 10 ka habeenimo ka billaabanaya ku soo rogeen gudaha magaalada Baardheere ee G/GEDO.
Bandowga oo uu saxaafadda u sheegaya Madaxa ammaanka ee degmada Baardheere Sh.Faarax Xiish Muxumed oo loo yaqaano Shureyn ayaa xalay markii ugu horaysay ka dhaqan galay magaaladaasi, waxaana la arki karay ciidamo katirsan kuwa islaamiga ah oo roondaynaya gudaha magaalada.
Sh Shureyn ayaa tilmaamay in uu dhaqan galay bandowgaasi oo aysan illaa iminka jirin cid ka dhaga adeegtay ,waxaana uu amaan u soo jeediyay dadka kud haqan magaalada baardhere sida ay u fuliyeen awaamiirta.
Bandowgani ayaa waxaa ay maamulka alshabaab ee baardheere ku macneeyeen in uu la xiriiro sidii loo taabagelin lahaa amaanka magaalada Baardheere
Dhinaca kale madaxa ammaanka ayaa waxaa uu saxaafadda u sheegay in amaro ay soo saareen maamulkoodu ay sidoo kale kamidtahay in raga iyo haweenka aysan gaadiidka wada raaci karin waxaana sida uu tibaaxay arrintaasi ay tahay mid la doonayo in lagu baa’ibiyo dhaqamada xun xun sida ii hadalka u yiri.
Sarkaalkaasi ayaa ugu dambeyn ka digay in aan qaadka lagu iibin karaynin gudaha magaalada baardheere , isagoo sheegay in la geeyo qaadka baraha loo cayimay oo ku yaalla degmada dhexdeeda.
Tillaabooyin isxigxiga ee ka soo baxaya xoogaga islaamiga ayaanay dadweynaha ku dhaqan magaalada baardheere wax jawaab ah ka bixinin ,waxaana qaar badan oo aan la xiriirnay ay ka gaabsadeen inay saxaafadda la hadlaan.
Horaan ayay ahayd markii magaalada kismaayo laga mamnuucay in gaadiidka ay isla raacaan raga iyo dumarka.